I-methenolone enanthate ekuthengiseni kwi-methenolone enanthate powder | AASraw
I-methenolone enanthate ekuthengiseni kumthengisi we-methenolone enanthate powder eChina
/Blog/Masteron Inanthate/I-methenolone enanthate ekuthengiseni kumthengisi we-methenolone enanthate powder eChina
ezaposwa ngomhla 02 / 13 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Masteron Inanthate.
1. Yintoni i-methenolone enanthate?
I-methenolone enanthate /i-methenolone enanthate powder i-anabolic ende ende eneendawo eziphantsi kakhulu ze-androgenic, i-methenolone enanthate injectable version ngu-primobolan depot. I-methenolone enanthate injectable version ikhethwa ngaphezu kweenguqu zomlomo, ngenxa yoko isebenza ngokukhawuleza kwaye ixabiso lentlawulo. I-methanolone enanthate yi-anabolic steroid ene-action androgenic encinci. Unentshukumo enamandla ekunyuseni kobunzima bomzimba. I-methenolone enanthate / i-methenolone enanthate powder ayinakwandisa kakhulu ubunzima besisipha, yeso sizathu esinokusetyenziswa ixesha elide. Ukukhula kwamascle kukhunjulwa yi-methenolone enanthate kugcina nangemva kokuyeka ukusebenzisa. I-methonolone enanthate powder yiyobisi onokufumaneka ngaphandle kwemithi. Nangona kunjalo, izigulane ziboniswa ukuba zidibane nogqirha kuqala kwaye zifumane umyinge ofanelekileyo ngenjongo.
2. Umthengisi we-methenolone enanthate powder
I-methenolone enanthate powder, eyaziwa nangokuthi i powmo E e powder, impahla ye-primo enanthate, i-powder white crystalline. I-methenolone enanthate powder eluhlaza isithako esiyinhloko sokwenza i-methenolone enanthate injectable version. Kulula ukuthenga i-methenolone enanthate powder online ngaphandle kwemithi evela kumthengisi we-methenolone enanthate powder.
Njengoko abadlali abanamava bathi i-methenolone enanthate injectable version-primobolan iyancipha xa kuthelekiswa neendleko ze-anabolic agent. Oku kuchaza ukuba abaninzi abadlali bafuna ukufumana ifomda ye-powhenolone enanthate. Nangona kunjalo, nangona oku kuthelekiswa ngokuya ku-AAS, kwaye akusiyo yonke into ekwazi ukuthenga i-methenolone enanthate powder. I-AASraw isitolo se-intanethi, ukuqonda ukubaluleka nokusetyenziswa kwe-steroids, kwaye iyayithengisa ngentengo ekhangayo, ngenxa yokuba AASraw ngumenzi wobugcisa.
Ukurhweba ivenkile ye-intanethi igxile ekuthengiseni kuphela umgangatho ophezulu we-steroids eziphathekayo, ii-hormone zesondo, i-hormones yokulahlekelwa ngamafutha emhlabeni jikelele. Ukungabikho kunye nazo zonke iintlobo zorhwebo ezisemgangathweni ngenxa yokuba loo mveliso ifinyelela kumthengi ngokuthe ngqo, ngaphandle kokuhamba ezininzi "iiofisi zokutshintshwa kwexeshana", abanikazi abangaphuthelwa ithuba lokukhupha impahla. Abo badlali abaye banamava okusebenza kunye nathi bayazi ukuba ngokuqhagamshelana nevenkile yethu, baya kubeka imali ngokuqinisekileyo, kwaye banokufumana into eluhlaza.
Iintetho ezifanayo 4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] heptanoate;Methenolone Enanthate(PriMobolan);PriMo E;Androst-1-en-3-one,1-Methyl-17-[(1-oxoheptyl)oxy]-, (5a,17b)-;Methenolone Enanthate,(Primo E);Androst-1-en-3-one, 1-methyl-17-[(1-oxoheptyl)oxy]-, (5α,17β)-;METHENOLONE ENANTHATE;1(5-ALPHA)-ANDROSTEN-1-BETA-METHYL-17-BETA-OL-3-ONE ENANTHATE
3. Inzuzo ye-methenolone enanthate
1) I-anabolic eninzi
I-methenolone enanthate injectable version-primoblan, nangona ivelisa umbane obuthakathaka kuneCaaa Durabolin yinto enhle kakhulu ye-steroid eneempembelelo ezininzi ze-anabolic. Inyaniso yokuba i-esanthate ester yongezwa kule steroid yenza ukuba ukukhululwa okucothayo nokugqithiseleyo kwisayithi yomjovo. Olu kongeza luvumela ixesha elide elingaphezulu kweentsuku ze-14 (kufana ne-Testosterone Enanthate) nangona abaninzi abadlali bekhetha ukuyiqhuba ngeveki.
2) I-steroid kuphela ebonakala isebenza ngesithende kwi-calorie ephantsi yokutya
Ukugqithiswa kwe-methenolone ukuphakanyiswa kubangelwa kukuba yiyona kuphela i-steroid ebonakalayo isebenza kakuhle kwi-calorie ephantsi yokutya (okwenza kube yi-anti-drug drug choice) kunye nemiphumo emibi ayifumanekanga ingxaki kuba ingaba yingozi, iphantsi i-androgens kwaye ayiguquki kwi-estrogen (i-aromatize) ngenxa yoko iziphumo ezichaphazelekayo ze-estrogen ayikho imbambano. Ukongezelela kule nto kubonakala kunemiphumo emihle kwisistim somzimba (ngoko ke ukusetyenziswa kwayo okuqhelekileyo kwizigulane zeAids) kwaye inyaniso eyongezelayo ngokubaluleka kwezona zinto zikhokelela ekuqiniseni yonke inkqubo yomzimba.
3) Imiphumo engaphantsi kwemivuzo
Iimpembelelo ezinxulumene ne-Androgenic zihlala zigcinwe kuphela kubantu abanobucayi, okanye abo bakhetha ukuthatha amanani aphezulu emveliso. I-Primover idlalwa njenge-steroid ekhuselekileyo xa kuthelekiswa nezinye iimveliso, kwaye imveliso efunwa kakhulu ebonakalayo kwiindleko zayo. I-intanolone enanthate isetyenziswa ngabantu abafuna ukugcina i-estrogen kunye nemiphumo echaphazelekayo kunye ne-androgenic. Kwakhona ukhetho oluthandwayo lokusika imijikelezo ngenxa yeempawu zayo ezincinci ezinokuthi zilungele ukugcina izicubu ze-muscle phantsi kokudliwayo kwangaphambili kokutya. Ukugqithiseleka kwamanzi angaphantsi kwamanzi akuyi kuba yinkxalabo ngenxa ye-methenolone enanthate engumgangatho ongenamnandi. I-compound ingenakongezwa kwimijikelezo yokubhengeza ukuphakamisa uhlobo lwe-anabolic lo mjikelo ngeli xesha ukunciphisa ukongezwa kwi-estrogen yonke kunye nemiphumo ye-androgenic.
4. Thenga i-methenolone enanthate powder kwi-methenolone enanthate powder supplier
Uninzi lwabalimi bomzimba lukhetha ukubeka i-methenolone enanthate kunye nezinye i-steroids ukuphucula iziphumo kunye nokufumana iziphumo ezikhawulezayo. Ukuba umgijimi uyadla okanye kwisigaba sokusika ke i-androgen engenzi-aromatizing njengeHalotestin okanye iTrenbolone yongezwa. Icandelo le-androgenic elinamandla linceda ukuzisa ubuninzi obuninzi kunye nobunzima kwimisipha. I-Winstrol, enye i-anabolic steroid enobulali isetyenziswa ngokuqhelekileyo. Umphumo wale nhlanganisela kukunyuka okuphawulekayo kobunzima bomzimba kunye nobunzima kodwa ngaphandle kwemiphumo emibi. I-methenolone enanthate ithathwa njengenye ye-anabolic steroids ephephile. Nangona ithuba lemiphumo elibi kunye ne-methenolone enanthate liphantsi kakhulu, umntu unokufumana. Zingabandakanya isikhumba seoli, i-acne, iinwele zomzimba ezingafunekiyo, kunye nebala lomzimba wesilisa. Uninzi lwexesha nayiphina imiphumo yomntu umntu afumana ngayo yiphumo lokusebenzisa eliphezulu kakhulu kumlinganiselo.
Thenga i-methenolone enanthate powder kwi-methenolone enanthate powder supplier, fumana i-methenolone e-enanthate powder engcono kakhulu yokwenza i-methenolone enanthate injectable.
tags: I-Methenolone Inanthate powder, i-Methenolone enanthate powder
I-Masteron Inanthate I-Longer Esebenzayo ne-Androgenic Anabolic Steroid (AAS)
Ngaba ngokwenene i-Modafinil ekuphuculeni i-brainpowder isebenza kakuhle Emva kokuthatha?	I-sex hormore tadalafil powder: Iifayili ze-12 malunga nesondo sokuphucula isilwanyana ofuna ukuba wazi !!!
I-Clostebol Acetate (iTurababol) ipowder
I-Lapatinib powder (231277-92-2)
I-Mibolerone powder (3704-9-4)